China UCF211-32 Rakasonererwa Mupiro Block Kupa Mugadziri uye Mutengesi | Kunmei
KM UCF211-32 piro block inobereka, saizi yekutakura haina kufanana neUCF211, ndeimwe yekutakura kusiri-kwakajairika. Ingondiudza saizi kana chinhu chinotakura, ini ndichakugadzirira rondedzero yemitengo.
Iyo piro block inobereka iri chaizvo musiyano weakadzika groove bhora rinotakura. Mhete yaro yekunze yekunze dhayamita pamusoro yakatenderera, iyo inogona kuenzaniswa mune inoenderana concave idenderedzwa rinotakura chigaro kuti uite basa rekuenderana. Iyo yekunze idenderedzwa yakatakura inonyanyo shandiswa kutakura yakasanganiswa radial uye axial mitoro iyo inonyanya kuve inotenderera mitoro. Kazhinji, hazvina kukodzera kutakura axial mitoro yega.
Iyo yekunze dhayamita yepamusoro yakatenderera, iyo inogona kukosheswa mune inoenderana concave idenderedzwa pamusoro pechigaro chinotakura kuti uite chinzvimbo chekuenderana. Piro block mabheyaringi anonyanya kushandiswa kutakura radial uye axial yakasanganiswa mitoro, iyo inonyanya kutenderera mitoro. Kazhinji, haina kukodzera kutakura axial mitoro yega.
Chigadzirwa zita UCF211-32 piro block inobereka
Saizi d * B * L 50.8 * 55.6 * 163
Maumbirwo inobereka unit
Feature vane iyo yekugadzika kugona, iri nyore kugadzira, kuve nekaviri chisimbiso mudziyo, inogona kushanda mune inotyisa mamiriro
B: 30% T / T pamberi. 70% T / T Pamberi Shipment
Yaiba Chinyorwa keji yesimbi
1. Kudzvinyirira kwakaderera, kushomeka kwesimba kwesimba, kushanda kwakanyanya kwemishini, nyore kutanga; Yakanyanya kunyatsoita, hombe mutoro, madiki kusakara, hupenyu hwakareba hwebasa.
2. Yakaenzana saizi, kuchinjika, kuisirwa nyore uye nekukatanura, nyore kugadzirisa; Compact chimiro, kurema uremu, diki axial saizi.
3. Mamwe mabheyaringi ane mashandiro ekuzvimiririra; Inokodzera kugadzirwa kwemazhinji, yakagadzikana uye yakavimbika mhando, yakakwira kugadzirwa kunyatsoita.
4. Transmission kukweshera torque yakanyanya kuderera pane inoyerera ine simba kumanikidza kutakura, saka kukweshesana tembiricha kumuka uye kushandiswa kwesimba kwakaderera; Iyo yekutanga yekukwesana nguva ingori zvishoma zvishoma pane iyo yekutenderera yekukwesana nguva.
5. Kunzwa kwekutakura deformation kutakura shanduko ishoma pane yeiyo hydrodynamic inobereka.
6. Axial saizi idiki pane yechinyakare hydrodynamic kutakura; Iyo inogona kumiririra zvese zviri zviviri zvine hunyanzvi uye nekusunda mitoro yakasanganiswa.
7. Dhizaini yakasarudzika inogona kuwana kugona kwakanakisa pamusoro pehuwandu hwakawanda hwekutakura-ku-kumhanya; Kubereka mashandiro kuri kusava nehanya nekuchinja-chinja mukutakura, kumhanya uye nekumhanyisa kumhanya.
UCF inoshanda minda: zvekurima michina, chikafu michina, nezvimwe.
Mamwe Mamwe Mifananidzo
Pashure: Kupisa Kwakanyanya 6206ZZ Yakadzika Groove Bhora Kupa
Zvadaro: MB Cage 22330MB Spherical Roller Kubereka
Agriculture Kubereka UCP Series Rakasonererwa Mupiro Block Bea ...